Vanhu Vazhinji Vanoungana Ku Nhandare Ye Freedom Square Vachionekana NaVaMorgan Tsvangirai.
Kukadzi 19, 2018
Vatsigiri veMDC vachionekana nemutumbi waVaTsvangirai
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti kuungana kwaita vanhu munhandare yeFreedom Square muguta reHarare kwaratidza kuti VaMorgan Tsvangirai vange vari munhu wevanhu, uye vachemwa neruzhinhi rwevanhu kubva kumasangano nenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese.
Vatauri vakasiyana siyana vataura pamusoro pemufi paGungano iri. Vanomiririra masangano akasiyana-siyana vapiwawo mukana wekutaura nevanhu vachitsinhira mashoko ekuonekana naVa Tsvangirai, vamwe vachipawo mashoko enyaradzo nekurumbidza mufi.
Asi vamwewo vashoropodza zvaitwa nehurumende zvekuti VaTsvangirai vachemwe nehurumende, uye kutakura mutumbi wavo nechikopokopo kubva kuHarare kuenda kwaHumanikwa kuBuhera kwavari kuchengetedzwa neChipiri.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaRejoice Ngwenya, vanoti havaoni paine chakapia pane zvaitwa nemukuru wenyika pamwe nehurumende, uye zvose zvinoda kutendwa nekuti hazvaitarisirwa muhurumende yaVaMugabe.
VaNgwenya vanotiwo veruzhinji havafanirwi kukanganwa kuti VaTsvangirai vakambove mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa, izvo zvinofanirwa kuitwa kune munhu akamboshanda muhurumende, vachitiwo VaTsvangirai vaifanirwa kutoiswa panovigwa magamba enyika, paHeroes Acre.
Hurukuro naVA Rejoice Ngwenya